Fampiratiana :: Aseho ao anaty hosodoko ilay boky « Antsa » an’i Jacques Rabemananjara • AoRaha
Fampiratiana Aseho ao anaty hosodoko ilay boky « Antsa » an’i Jacques Rabemananjara
Tsipi-panohizana eo amin’ ilay boky tononkalo asa soratr’i Jacques Rabemananjara nampitondrainy ny lohateny hoe « Antsa » sy ny kanto ankehitriny no azo amintinana ny fampirantiana hosodoko hatolotr’i Tahina Rakotoarivony, etsy amin’ny Is’art Galerie Ampasanimalo manomboka rahampitso.
« Hotetezina ny vanim-potoana namolavolana sy namoahana an’ity boky ity sy ny fivoaran’ny kanto hatramin’izao fotoana izao », araka ny fanazavan’ ny mpamolavola ny fampirantiana. Havoitra anatin’ny hetsika ny herin’ ireo teny izay navadika ho kisary.
Tamin’ny fiafaran’ny taona 40 no nivoaka ny « Antsa », ilay boky tononkalon’i Jacques Rabemananjara. Afaka mifandahatra amin’ireo mpahay fampiadiana rima fanta-daza any ampitan-dranomasina any ity mpanoratra malagasy ity.
Midadasika hatrany ny sahan’ny famoronany sady mahafehy sehatra marobe. Tsy miala lavitra an’izay ihany koa i Tahina Rakotoarivony eo amin’ny tontolon’ny hairaha arak’endrika amam-bika voiziny ankehitriny. Hampihaonina ao anatin’io fotoam-pampirantiana io izany talentan’izy mianaka ireto izany.
Tetikasa Tosik’art Norombahin’ Andriambalo Tantelinirina ny 20 tapitrisa ariary
Fampiofanana mitohy Hisy fampianarana kabary manaraka lohahevitra etsy Andavamamba
Faribolana sandratra Mitohy hatrany ny fanapariahana ny fitiavana ny literatiora
Seho sehatra :: Hovelomina etsy Andavamamba ny “Vazo Miteny”